November 29, 2011 na 7:18 na
Short koodu oku Transposh wijetị anaghị arụ ọrụ na-akpata-egbu egbu na njehie –
– Kearu njehie: Na-undefined usoro transposh_plugin_widget:: transposh_widget () na na akara 407
Olee otú m idozi nke a? The dum na saịtị ahụ na-adịghị arụ ọrụ mgbe update n'ihi njehie a 🙁
November 29, 2011 na 7:42 na
Ee, a ahụhụ – biko dochie 407 kwekọrọ:
ma gbalịa ọzọ,
Ọ nwekwara ike uru mara na ị nwere ike izipu a param now akọwapụta na anya nke plugin n'ime $instance agbanwe
November 29, 2011 na 10:10 na
Daalụ! Ee, nke a bụ debug koodu! Ma ugbu a, na-egosiputa listbox na m chọrọ iji gosipụta flags. Olee otú ime ya na-ezighị ezi nke na flags na-egosipụta.
November 29, 2011 na 12:15 obi
Ebe ọ bụ na Echere m na ị na-akpọ ya dị ka:
Ị ga na-akpọ ya ugbu a ihe dị ka:
November 29, 2011 na 12:39 obi
Ihe niile na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè 🙂
November 29, 2011 na 12:45 obi
Hi Ana m enwe otu nsogbu. Ebee ka m chọta 407 akara otú m nwere ike dochie ya n'elu debug koodu biko? Daalụ
November 29, 2011 na 8:45 obi
ya na transposh_widget.php na WP ndekọ nke plugin, ma ọ bụrụ na i nwere ike adịghị jikwaa, eji na kọntaktị anyị na-etolite na saịtị a anyị ga-ezitere gị a ofu version
November 29, 2011 na 1:06 obi
Daalụ, ma olee otú Ibu Ibu CSS?
M na-eji transposh_widget(mgwo ahia(), mgwo ahia('Aha’ => 'Translation', 'Widget_file’ => 'Ọkọlọtọ / tpw_flags.php'));
Ọkọlọtọ dị ugbu a, Otú ọ dị, adịghị Ibu Ibu tpw_flags.css.
November 29, 2011 na 11:43 obi
Ee, nke a bụ a tricky akụkụ,
e nwere ụzọ abụọ iji aka a, na otu onye bụ na m ga-eche nke n'ụzọ ụfọdụ iji dozie ya (ihe ziri ezi) na ndị ọzọ bụ ka ịgbakwunye wijetị a sidebar ị na-agaghị na-egosipụta nke ga-amanye na mgbakwunye na nke na-CSS.
Nke a na koodu bụ n'ezie ezi tricky n'ihi na ugbu a CSS na kwukwara (na aggregates) niile nọ n'ọrụ wijetị, na e nweghị ụzọ mara n'ezie nke sidebars ga-egosipụta na nke na peeji nke, otú n'ọrụ wijetị na-atụle.
onye ọzọ n'ụzọ ga-amanye na mgbakwunye na nke ziri ezi na CSS na n'ezie ziri ezi ebe ke egbu nke na peeji nke, nke pụtara na-agbakwunye ihe emereme on wp_print_scripts na nke ekpede wijetị klas add_transposh_widget_css … M na-eche na nke a ga-adị oke ọtụtụ ọrụ, otú na-aga na hackerish ụzọ bụ ndị dị otú ahụ a ọjọọ echiche.
November 29, 2011 na 9:55 na
Daalụ maka ọrụ ị na-eme ka anyị.
Ị nwere ike dokwuo anya ebe ahụ API AMAOKWU Ịfanye plugin?
November 29, 2011 na 12:08 obi
Akpa, M ga-dokwuo anya na ị na-adịghị mkpa ọ bụla igodo na ihe niile ga-arụ ọrụ.
M nwere ike ịgwa gị na ụzọ kacha mma iji chọta igodo bụ iji search engine-ahụ na ha, dị nnọọ anya maka “X ịsụgharị API Key” ebe X bụ aha nke ọkacha mmasị gị otu,
Adịghị m ikenye kpọmkwem njikọ n'ihi na:
1. Ha mgbe niile na-agbanwe ha URLs, na emekpala imelite onye, otú ahụ ka m na-achọghị ka na-eduhie ga-eme n'ọdịnihu na-agụ akwụkwọ
2. M na-adịghị na-akwụ ụgwọ maka na-ezo aka na ha, ma ọ bụ ka m na-eche na ọ dị mkpa na ị na-eme
3. M na-na-a bit umengwụ 😉
November 29, 2011 na 4:51 obi
N'Ezie ọtụtụ ihe ndị ọzọ ngwa ngwa, ekele.
Otú o sina dị, M nwere nsogbu ike a Sitemap onye ga-atụle n'asụsụ niile. Ị nwere ihe ngwọta maka nsogbu a?
November 29, 2011 na 8:46 obi
E a kwachie maka Google XML Sitemaps plugin, na – Version 4 beta nke Plugin achoghidi kwachie. Ị nwere ike ịhụ kwachie na anyị trac saịtị
November 29, 2011 na 11:10 obi
otú mma ichere ruo ọhụrụ 0.81 version ? ọ bụrụ na anyị achọghị ka ịmachi aka ?
November 29, 2011 na 11:25 obi
M na-ekwe nkwa na a ga-ọhụrụ chinchi ke 0.8.1 😉 ma kpọrọ, i nwere ike ide m na m ga-eziga gị a patched version, ma ọ bụ ịmachi ya onwe gị. Ọzọkwa – ọtụtụ ọrụ na-adịghị eji nke a mma, nke nwere ike na--anọchi ịtụkwasị a wijetị oyiri na a sidebar na kama inserting wijetị koodu ozugbo, inserting na sidebar…
November 30, 2011 na 1:41 na
Ndewo, mbụ niile ekele maka ebube gị plugin. Nke abụọ, mgbe ikpeazụ update m na-enweghị dezie m translation. Mgbe m clich Dezie button na peeji nke ịgbanwe ịsụgharị mode ma anaghị m nwere ihe ọ bụla popup window gbanwee. Ị nwere ike ị nyere m aka?
November 30, 2011 na 7:01 obi
Biko jiri kọntaktị na ụdị na anyị ga-arụ ọrụ na-gị na gwara a, eleghị anya a ọhụrụ agha ndị ọzọ plugins
November 30, 2011 na 9:44 obi
Ezio, nwere ike ị na-elele ma ọ bụrụ na popup window ugbu a na-egosipụta na njedebe nke gị na peeji nke na-enweghị ụdị?
November 30, 2011 na 7:53 na
Ndewo e. M na gbazie ahụhụ ma apụghị m ịgbanwe dropdown azụ flags. M na-ịgbakwunye n'elu koodu ala nke widget.php ma ọ bụ a dị iche iche faịlụ?
November 30, 2011 na 7:00 obi
Ị mkpa ịgbanwe koodu na-akpọ wijetị, ọ kọwara n'elu
November 30, 2011 na 9:59 na
Ndewo, M nnọọ arụnyere ọhụrụ version 0.8.0, ma ọ dịghị arụ ọrụ ugbu a ihe ọ bụla… eme? daalụ!
November 30, 2011 na 7:02 obi
Biko kpọtụrụ anyị na na anyị ga-agbalị idozi ya
December 5, 2011 na 12:54 obi
N'ihi na e na otu: M edozi nsogbu canbiando Jquery na script na ejikọrọ 🙂
Deborah-agba chaa chaa na-ekwu,
November 30, 2011 na 4:07 obi
Transposh adịghị egosipụta n'ụzọ kwesịrị ekwesị version 0.8.0 Ọ bụ n'ebe ahụ a fix?
November 30, 2011 na 7:05 obi
Ndewo ebe ahụ, yiri ka a CSS nke, kpọtụrụ anyị kpọmkwem na-arụ ọrụ na a fix
Glenn Newland na-ekwu,
November 30, 2011 na 5:44 obi
M greatful maka ọrụ niile i etinye n'ime ọhụrụ ntọhapụ, na-atụle otú ike na google API nsogbu pụrụ ịbụ na obibi na mbụ. Ị MERE NKE ỌMA!
Ihe m na-achọ ịmata ihe bụ otú m nwere ike hụ na m na saịtị na-na e depụtara mba na mba search engines, na otutu asụsụ? M pụtara, ekele Transposh m na saịtị bụ ugbu a ogugu na 3 asụsụ, ma ahụ bụ na otu dị ka ọ bụ “kwadoro” na thoe asụsụ ma ọ bụ na-eme m mkpa ime ihe (dị ka oghere ọ bụla na peeji ma ọ bụ mepụta a multisite?)
Daalụ maka ọhụrụ ntọhapụ, na API fix.
The Red igwe
November 30, 2011 na 7:08 obi
Ị nwere nsogbu gị na saịtị nke ga-ekwe ka search engines ịhụ gị na saịtị, m maa bụ a nchekwa data nke, ma, ọ chọrọ ule, kpọtụrụ anyị kpọmkwem na-arụ ọrụ na gwara a
December 2, 2011 na 9:56 na
OK Ofer, M kpọtụụrụ ị ozugbo. Mgbe nke ahụ gasịrị, M na-ewepụ Disallow: /index.php / * m robots.txt faịlụ. Ma eleghị anya, nke a bụ ihe na-akpata?
December 2, 2011 na 10:06 na
Ọ bụghị, ihe na-akpata na-efu nchekwa data tebụl, M dere gị kpọmkwem bụ banyere nke na-esi edozi ya.
December 1, 2011 na 12:38 na
Great update. Enwere ụzọ nke na-eme ka flags ọ bụla ibu? Ha na-a bit furu efu na-acha ọcha ndabere.
December 1, 2011 na 12:28 obi
Ị ga-ahụ ibu ọkọlọtọ na-eji dochie nke ugbu a ndị, ma ọ bụ dee a subwidget – ịhụ http://trac.transposh.org/wiki/WidgetWritingGuide
December 1, 2011 na 6:01 na
Ọhụrụ plugin mebiri m na saịtị mgbe wụnye ya taa. M chọrọ ka m na-kwalite n'ihi m dum na saịtị bụ ala ugbu a ma ọ bụrụ na m na-enyere ndị ahụ plugin 🙁
December 1, 2011 na 12:25 obi
Biko agbalị re-wụnye plugin si wordpress.org, a fix maka a breakage maka ọrụ nke wijetị ọrụ e deployed, i nwere ike ịkpọtụrụ anyị na na anyị ga-enyere
Ndị ọzọ na- na-ekwu,
December 2, 2011 na 10:53 na
Pụọ edit ederede na ver. 0.8, kedu ihe ọ bụ?
Mgbe saịtị a http://www.wcafeasia.com na arụnyere na plugin ma ike dezie ọ bụla ederede na niile?
Nwere ọzọ na saịtị na erlier version na-arụ ọrụ ọma, M nwere usel otu ntọala na onye a (0.8), ma pụọ ​​edit.
M fanye à API isi si Google (n'ihi na ihe nchọgharị)
Onye ọ bụla maara?
December 2, 2011 na 11:29 na
Gị isiokwu loading a jQuery1.3.2 (nke bụ oge ochie), idozi ya ga-nnọọ obi ụtọ
December 2, 2011 na 1:18 obi
Daalụ maka zaghachi! Ị nwere ihe ọ bụla echiche otú ime na?
December 2, 2011 na 3:21 obi
Ma ọ bụghị na:
Dezie ugbu a isiokwu faịlụ wepụ agụnye (eleghị anya na-nkụnye eji isi mee)
Hichapụ faịlụ onwe ya ma ọ bụ dochie ya
December 3, 2011 na 6:39 obi
Re-arụnyere .80 version kwa ntụziaka, na saịtị bụ ka 100% agbajikwa ọ bụrụ na m enyere ndị plugin.
Okwu nke ịkpachara anya – adịghị ịwụnye a version, ọ nwere ike imebi gị na saịtị dị ka ya mere m.
M ehichapụ ngwa mgbakwunye nchekwa, unzipped a ọhụrụ oyiri nke 0.80 ma ka na dum na saịtị na-aga afọ elu. Ọ dịghị ihe ngosipụta – ọ ga-aghọ a na-acha ọcha nchọgharị na ihuenyo.
December 4, 2011 na 8:19 na
Ekwenyere m na, mgbe wụnye ọ bụla upgrades, ihe niile nwere ike imebi, ma gị na mgbe, anya na FAQ, nke a bụ ịbụ na ebe nchekwa ịgba nke, ma ọ bụghị na anyị na-ahụ a ihe mere na ọ ga-jikọọ na nkwalite.
Ugbu a, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a nke kpebiri, na-agbalị ịkpọtụrụ anyị ozugbo, anyị na-agbalị inyere. Mgbe ụfọdụ, anyị na-eme adịghị
December 4, 2011 na 6:25 na
Ịmeela ụmụ okorobịa!
The plugin na-akpọ zuru okè karịa mgbe n'ihu!
Ihe ole na ole ka ihe doo:
1. Biko ị nwere ike kọwaa otú ịgbakwunye sụgharịrị peeji nke ka Sitemap? (M ga-esi na ya mgbe i kwuru banyere ya na aga na-ekwu).
2. Nke a dịkwa mma na WP Super Cache?
December 7, 2011 na 1:11 na
1. Azịza ya bụ na FAQ na anyị dev saịtị (http://trac.transposh.org)
2. Ee, nnọọ
Nke ahụ na-ekwu,
December 4, 2011 na 10:28 na
Akpa, ka m na-ekwu, ị nwere oké plugin. M nọ USA, na-arụ ọrụ a ndekọ na saịtị na Morocco. The ndabere asụsụ na saịtị bụ French. On a na saịtị, ulo oru nwere ike tinye a ndepụta na ndekọ (ọkọlọtọ post ụdị) iji asụsụ dị iche. Ka ihe atụ ma ọ bụrụ na a azụmahịa ndị tinye a ndepụta na English, na plugin ga ịsụgharị post (ndepụta) niile n'ọrụ na-asụ asụsụ, ma e wezụga ihe ndabere asụsụ (n'ihi na ọ na-ekwere na ọ bụ French?). Yabụ, na English version na French translation-ma n'ezie otu English version. Saịtị nwe chọrọ niile nke posts na-egosipụta na ndabere asụsụ; na-abụ dị na nke ọ bụla nke nọ n'ọrụ na-asụ asụsụ. Ọ bụ n'ebe ahụ a shortcode ka kechie dum ndepụta na, n'ihi ya, ọ ga-egosipụta na ndabere asụsụ? (dịka [tp ịsụgharị ="fr"]Ndewo[/TP] na ọ ga-egosipụta Bonjour. Ma ọ bụ, bụ n'ebe ndị ọzọ ụzọ mezuo nke a?
December 6, 2011 na 3:02 na
Nwere onye na-enwe otu nsogbu?
Ọ na-adịghị ịsụgharị ọzọ
December 7, 2011 na 1:10 na
Ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu, egbula iji kọntaktị ụdị a na saịtị, na anyị ga-eme ihe kasị mma anyị aka
December 6, 2011 na 5:23 na
Ọfọn, M didnt ịnụ ihe ọ bụla azụ. Otú ọ dị, M chepụta otú mezuo ihe m chọrọ-enwe ike ime. Nanị kechie ọdịnaya a ngalaba mkpado na a na klas nke mylang.
Ọzọkwa, FWIW, n'ihi na onye ọ bụla na-achọ ebe ihe maka ihe ọ bụla ihe ọmụma banyere ma ma ọ bụ na a plugin ga ịsụgharị omenala post ụdị. Ọ bụ ezie na plugin adịghị aghọta a isiokwu na-emekarị post ụdị, ị nwere ike tọghata plugin-arụ ọrụ na omenala post ụdị, pụtara ngwa ngwa. I kwesịrị dezie abụọ faịlụ. I kwesịrị dezie on_ajax_tp_translate_all() ọrụ transposh_admin.php na on_admin_menu() ọrụ, na transposh_postpublish.php.
December 6, 2011 na 4:12 obi
Mbụ m eji nke a，Mmetụta bụ oké nkwụnye ins。
Ma，M ugbu a nwere nsogbu，
Mgbe echichi，All peeji nke pụtara：
Olee otú m idozi ya?
December 7, 2011 na 1:08 na
My guesses ga-nsogbu na ebe nchekwa, ma ọ bụ abụọ gzipping nke
Stacy & James na-ekwu,
December 6, 2011 na 5:55 obi
ọtụtụ nde ekele Ofer n'ihi na-ekere òkè gị oru ngo.
E wezụga ogologo translation ọ na-anabata multi-asụsụ ngalaba ma ọ bụrụ na ihe karịrị 1 ndabere asụsụ a na-eji a ngalaba.
N'ihi na-maka oji onwe enyemaka maka obere nchọpụta nsogbu anyị nwere.
December 7, 2011 na 9:49 na
Nnọọ，M ka na-achọ ihe ngwọta na-nsogbu。
M ga-achọ ịjụ mgbe nyeere，A ga-enwe：
“Anyị adịghị ike ịchọta a na-akwado na-ebe nchekwa caching engine, wụnye otu onye nwere ike mma ịrụ ọrụ. Lelee Transposh Ajụjụ”
M na-aga ileghara ya anya，Ka nwere obibi ya tupu ha nwere ike ịrụ ọrụ were were?
Ndị ọzọ na-，M ugbu a na-eji a ofu URL ọnọdụ bụ a space usoro，atụ：http://www.wukungfu.com/archives/123
Dị otú ahụ a URL set ga-emetụta?
Na-atụ anya ngwa ngwa eji ~ Daalụ maka enyemaka gị
December 7, 2011 na 12:02 obi
Iji ajụjụ gị:
1. Ị nwere ike n'enweghị eleghara a ịdọ aka ná ntị, nanị ihe ọ na banyere arụmọrụ, na plugin ga-arụ ọrụ na-enweghị ihe a
2. The Permalink Ọdịdị a ga-.
December 7, 2011 na 1:09 obi
Mgbe ahụ, m emechi GZIP edozi ^^。
Ugbu a ọma meghere nkwụnye，
Ma, m na-adịghị ahụ dị ka gị translation ngwaọrụ ke sidebar，
Olee otú ime ka plọg n'ime m sidebar?
Daalụ，M na-eche ngwa ngwa ịga nke ọma! ^^
December 7, 2011 na 1:28 obi
Iji na-etinye plugin na sidebar, na-aga gị anya menu na ịdọrọ ndị Transposh wijetị na sidebar, họrọ wijetị ịke ị chọrọ na aha ma na ọ bụ ya
December 7, 2011 na 1:26 obi
M hụrụ backstage setịpụrụ na-jupụta：
MSN API isi
Google API isi
Enwere m ike ide maka MSN API nke n'akụkụ na-aga na Google API?
Daalụ maka gị na-enyemaka ^^
December 7, 2011 na 1:30 obi
Ị nwere ike tinye ha ma ọ bụrụ na ị chọrọ, na-eso ntụziaka na ha kwesịrị ekwesị na saịtị, ma n'ihi na ugbu a na nke a na-adịghị mkpa
December 7, 2011 na 2:02 obi
Daalụ，Nwere ike akpatre egosi。
Otú ọ dị，Gịnị mere m ga-ahọrọ a dị iche iche asụsụ (atụ,：English)，Page e sụgharịrị ma?
Daalụ maka enyemaka gị ^^ vigorously
December 7, 2011 na 2:24 obi
Nke ahụ bụ n'ihi gị isiokwu loading a nnọọ agadi jQuery (1.3.2), otú dezie ya na-ahụ na ọ ga-arụ ọrụ
December 7, 2011 na 2:27 obi
M nnọọ nkwụnye a ikpuru sidebar，
M nwere ike ịhụ na ha onwe ha na kọmputa na-，
Ma, n'ihi na ndị ọzọ na kọmputa site na iji Shique adịghị ahụ。
Gịnị kpatara nke ahụ?
Ọ dị m nwute，Ajụjụ nke ukwuu ~
December 7, 2011 na 3:38 obi
Obi ụtọ na- ….jisiri-eme ka ọ na-arụ ọrụ …
Ebube nkwụnye ….
Great ọrụ Ofer…
December 8, 2011 na 2:11 obi
Ihere，Ị nwere ike biko nyere m aka ịchọta m peeji nke bụ a nsogbu?
N'ihi na jQuery，M na a gbanwee ubé。
Kwado nkwụnye ins now，ma Page、Nkeji edemede ka-adịghị a zuru translation，
December 11, 2011 na 1:24 na
The oghere tupu mgbe bolded ederede akwụsị na nsụgharị.
Ị nwere ike ịhụ ya ebe a?
December 11, 2011 na 1:28 na
ọma, eche m na-eji ike mkpado kama obi ike
December 12, 2011 na 1:33 na
M n'ezie na-eche na ọ ga-arụ ọrụ ezi, ọ dịghị ihe mere ya ga bụghị, biko nye a url ebe ọ bụghị
December 12, 2011 na 8:22 obi
Ị pụrụ ịhụ na http://intl.relatividad.org/pt/relatividade/albert-einstein-biografia-e-obras/
na n'ihe nile sụgharịrị peeji ndị na-akpa “ike” ikpe bụ na njehie, ma na
December 13, 2011 na 10:26 na
Ga-amasị m nọgide na-eji ukwu gị plugin, ma nke a na-eziga nkesa na bufee.
M arụnyere memcached na W3 Total Cache (naanị nchekwa data cache nyeere), ma na-arụpụta ihe na-akụda.
Ọ bụrụ na-arụsi ọrụ ike Transposh na a blog nwere 7.000 posts, naanị nke a bụ iji na-ntipịa CPU.
December 29, 2011 na 11:59 na
ihe ndị gị na ihe nkesa ụdịdị m mmefu ego nkesa ịṅụ 3 nnukwu weebụsaịtị na 20K posts ọ bụla na Transposh arụnyere. Ikekwe agbalị a agbara proxy ka Nginx?